Indlu yamaplanga enamagumbi okulala ayi - I-Airbnb
Indlu yamaplanga enamagumbi okulala ayi
Indlu yamaplanga ekwigumbi lokulala elinye kwiFord River iimayile eziyi-6 entshona kwe-Escanaba, eMichigan. Iindawo ezikufutshane ezinomtsalane ziquka igalufa, ukuloba, ukuqubha, ukuhamba ngephenyane kunye nokuhamba ngephenyane. Yonwabela indawo entle kunye nazo zonke izilwanyana zasendle eyadini. Ibhedi enkulu kwigumbi lokulala kunye nefuton epheleleyo kwigumbi lokuhlala. Ikhitshi elipheleleyo negumbi lokuhlambela elineshawa. Isitovu, ifriji, umatshini wokwenza ikofu, iti, izitya, ithowusta nezinto zokupheka eziqukiweyo kunye namashiti, iingubo, iitawuli, imiqamelo, into yokugalela amalahle, amalahle, umngxuma womlilo neenkuni.
Indawo yabucala neyasemaphandleni kuMlambo iFord. Iintaka, izimuncumuncu, amafudo, ii-chipmunks nezinye izilwanyana zityelela iyadi rhoqo. Ii-Eagles kunye ne-ospreys zininzi kwaye zininzi kwaye iidada kunye ne-geese zibuya nyaka ngamnye. Umlambo unokuviwa kwiveranda nangaphakathi kwindlu yamaplanga neefestile ezivulekileyo. Le ndawo ipholile kakhulu kwaye ithule ibe yenza kubekho indawo entle yokutyelela. Le yindlu yamaplanga esemaphandleni ekwicomplex.
4.75 · Izimvo eziyi-216
I-Escanaba ikumgama weemayile eziyi-6 kwimpuma kwaye ikunika ithuba lokuthenga kunye nokutya okumnandi kwidolophu. Kukho iindawo eziliqela zokudlala igalufa kule ndawo ibe ukuloba kuninzi echibini nemilambo emininzi.
Sihlala kufutshane (malunga neeyadi eziyi-150 kude) Siyafumaneka ukuba uyasidinga, kodwa siyazihlonipha izinto zakho eziyimfihlo.